Zakhiwa kanjani izahlulelo? - Mytika Speak
Ikhaya / I-Ego ne-The Physical / Zakhiwa kanjani izahlulelo?
Izahlulelo zakhiwa ngokuhluka. Abantu bakhuliswa ngokuhlukile futhi babona impilo nge-lens ehlukile ngenxa yalokho abakujwayele. Babona izimo ngokwabo umbono futhi lokhu kungaletha ukwahlulelwa.
Isibonelo, u-Ella noMaria bahlala ndawonye ekolishi. Ngelinye ilanga, uMaria ucasukela u-Ella ngoba ecabanga ukuthi u-Ella unomsindo kakhulu. Khonamanjalo u-Ella uphatheke kabi ngoMaria ngoba ucabanga ukuthi uMaria uthule kakhulu futhi ulindele ukuthi wonke umuntu alondoloze umsindo ophansi. U-Ella wakhulela emndenini omkhulu owawunomsindo. Emndenini wakhe, u-Ella wayebhekwa njengothule. UMaria wayewukuphela kwengane futhi wakhulela emkhayeni omncane owawukhuluma kamnandi. Emndenini wakhe, ubebonakala njengonomsindo. Bobabili uMaria no-Ella babheka ukukhuliswa kwabo kuyinto ejwayelekile ngakho-ke bahlulela omunye ngokuthi uthule kakhulu noma ukhala kakhulu kunezinga labo.
Lapho lokhu kungaboni ngaso linye kwenzeka, abantu baqala ukuhlobana nesimo futhi imvamisa bacabanga ngokwabo okuthile okuhambisana nokuthi “Angisoze ngakwenza lokho…” noma “Angiqondi ukuthi umuntu angakwenza kanjani…”. Ngobunye obuphelele, kuyaziwa ukuthi kuhlale kunesizathu sokuthi kungani abantu benza abakwenzayo. Lapho othile engakwazi ukuqonda okwenziwa ngomunye, indawo yonke ibeka ngokuzenzakalela isimo esizayo lapho bezokwazi ukuqonda ngokuhlangenwe nakho komuntu siqu. Kungenzeka ngqo kumuntu noma kumuntu abamthandayo ukuze afunde ukwamukelwa.
Isibonelo, uFatima uzwa ukuthi umngani wakhe uConstance uthandane nendoda eshadile. Lapho ezwa lokhu, uFatima ucasulwa uConstance bese ememeza, “Angisoze ngachitha umndeni onjengawe!” Eshayela ekhaya, uFatima ucabanga yedwa, "UConstance angahlala kanjani naye ngemuva kokwenza into embi kangaka?" Ubungani bukaFatima noConstance buyahlukana. Ngemuva kweminyaka eminingi, indodakazi kaFatima itshela umama wayo ukuthi umyeni wakhe wayesashadile ngonyaka wokuqala abathandana nawo. UFatima uzithola esesimweni lapho engeke avele axoshe indodakazi ayithandayo, kunalokho aphoqeleke ukuba afunde ukwamukelwa.
Lapho umuntu enza isinqumo, nabo baba necala. Imvamisa abakwazi lokhu kepha umphefumulo wabo nakanjani uyazi. Lokhu kuvame ukuholela kubantu abazama ukusebenzisa i-logic ukuphikisa lelo cala. Kwesinye isikhathi bakwenza lokhu ngokutotosa omunye umuntu ngenhloso yokuzithethelela ngecala labo lokwahlulela.
KULUNGILE ukuphila impilo yakho ngamanani owafundile kepha kungaba ukuhlakanipha ukuqonda ukuthi abekho abantu ababili abafanayo. Uma uthatha isikhathi ukuqonda kahle indaba ephelele yomuntu, uzothola ukuthi ngabe wenze okufanayo futhi wenza izinqumo ezifanayo ukube ubuphila impilo yabo. Wonke umuntu uhlala enza izinqumo ezinhle kakhulu akwazi ukuzenza ngaleso sikhathi.
Ukubona impilo yami
Esikhundleni salokho zama
bese ukhombisa inhlonipho.
Impilo yakho ngeyakho
phila ngendlela othanda ngayo.
njengoba ukwahlulela kulula.
Amathegiukuqonda izahlulelo ukukhula komuntu siqu izinkondlo ingokomoya
I-DiosRaw - Amber uthi:
Disemba 17, 2020 ku-3: 22 pm
Disemba 17, 2020 ku-3: 47 pm
UDavid M. Green uthi:
Disemba 22, 2020 ku-6: 12 pm
Leyo inkinga ngokuzibeka wena njengezinga lokwahlulela abanye ngalo. Kungcono kakhulu ukusebenzisa iBhayibheli njengesilinganiso kunokuphikisana nesiqu sakho.
Disemba 22, 2020 ku-6: 15 pm
Siyabonga ngokwabelana ngombono wakho David. Ngiyajabula ukuzwa ukuthi uthole indlela ekusebenzela. ❤
Disemba 22, 2020 ku-9: 18 pm
Wamukelekile. Ngisebenzisa iBhayibheli kuphela njengesilinganiso seqiniso; hhayi ukulahla abanye kepha ukwazisa isimilo sami, imibono yami nokuziphatha kwami.
Abanye bathanda ukushaya abanye ngayo bese bezikhohlisa bacabange ukuthi bangcono kunabanye.
Bafana nomuntu obuka ukubukeka kwabo esibukweni; khona manjalo ukhohlwe ukuthi zibukeka kanjani lapho zihamba.
Ngaphandle kokuba yimfundiso yenkolo, iBhayibheli lalakhelwe lowo muntu ukuthi azilinganise ngezinga leBhayibheli, hhayi ukukala nokulahla abanye.
Disemba 22, 2020 ku-9: 28 pm
Kunengqondo uDavid futhi ngiyathanda ukuthi uhloniphe ukuthi wonke umuntu unendlela yakhe. ❤️